Wasiiradda Arrimaha dibadda iyo Gaashaandhiga oo maanta hortagay Fadhiga Baarlamaanka Soomaaliya
Wasiiradda Arrimaha dibadda iyo Gaashaandhiga oo maanta hortagay Fadhiga Baarlamaanka Soomaaliya.
Baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta ku kulmay xaruntooda Golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, waxayna maanta Xildhibaanadu hordhigeen Wasiiradda Arrimaha dibadda iyo Gaashaandhiga a Su’alihii ay horay ugu soo gudbiyeen. Gudoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Prof Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa labo Su’alood oo ka soo maaxatay Xubnaha Baarlamanka Soomaaliya waydiiyay Ra'iiysal wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Marwo Fowsiyo xaaji Yuusuf oo ay ugu horeyso sida laga yeelayo hantida Qaranka ee dibadaha jirta.
Marwo Fowsiyo xaaji Yuusuf Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka jaawaabtay Su’alihii la waydiiyay ayaa waxay sheegtay inaan marnaba loo dulqaadan doonin xad gudub lagu sameeyo Hantida ma guuraan ka ah ee uu leeyahay Qaranka Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo isna la waydiiyay 3 Su’alood ayaa ka jawaabay mid kamid ah Su'alahaasi halka labada kalana Howlo shaqo awgeed u kaga tagay.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkii tagay waxa ay Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ka codsadeen inay hor yimaadaan wasiirada Gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda si halkaasi su’aalo ku saabsan shaqadooda uga waydiiyaan.